ỤBỊAM NA AGỤỤ LAA, MMEPE ABỤRỤ OZURUMBA N’ALA-IGBO – hoo!haa!!
ỤBỊAM NA AGỤỤ LAA, MMEPE ABỤRỤ OZURUMBA N’ALA-IGBO
In: Ndozi Obodo
-Dọkịnta Laz Ude Eze
Mmepe obodo dị na ụdị na ụdị. Biko ka m jụọ ajụjụ a. Olee ihe e jiri ama obodo mepere emepe? Ụfọdụ ga-asị na ọ bụ ezigbo okporo ụzọ, ọkụ latrik, nnukwu ụlọ, ógwè ọgbanélú (flyover) , ọtụtụ ụgbọala, na ihe ndị ọzọ dị iche iche.
Ọtụtụ ihe ndị a bụ ihe a na-ahụ anya. Ma na m chọrọ ka ị mata na ọ nwere otu ihe na-emepe obodo karịsịa ihe ndị ọzọ niile bụ ịchụ ụbịam. Ụbịam laa, agụụ e soro ya rie mwemwe ọsọ.
Ya mèrè na ndị ọchịchị niile n’Ala-Igbo niile kwesịrị ịgbasi mbọ ike hụ na atụmatụ mmepe obodo ha ji arụ ọrụ bụ nke ga-achụ ụbịam na agụụ ezigbo ọsọ. Nke a gụnyere ndị gọvanọ steeti, ndị isi okpuru ọchịchị ime obodo, ndị isi otu mmepe obodo (Town Unions), na kwa ndị nnọchiteanya n’ụlọ Ome iwu dị iche iche. Ndị ọzọ kwesịrị ị so n’akwalite mmepe obodo site na ịchụ ụbịam gunyekwara ndị ụka, ndị otu kwụrụ onwe ha (NGO), na ndị otu mba ụwa dị iche iche (International Organisations).
O kwesịrị ka ndị a niile jikọta aka ha ọnụ, rụkọọ ọrụ mepụta ọtụtụ ihe ga-enye aka chụọ ụbịam na mba anyị dị iche iche na steeti Abia, Anambra, Delta, Ebonyi, Enugwu, Imo na Mbammiri (Rivers).
Ihe ndị a ga enye aka chụọ ụbịam na agụụ gụnyere:
Nke mbụ, *Ezigbo Ahuike:* A na-ekwu okwu sị na ahụike bụ akụ. Ya mere na ihe mbụ kachasị mkpa mmadụ ọ bụla dị ndụ kwesịrị ịnwe bụ ahụike. Gọọmenti kwesịrị ị hụ na ụmụaka, ndị nne, ndị nna, na ọha obodo nwere ahụike. Ka a na-agbasa ozi na ígwè redio kụziere Ndigbo niile akparama agwa na akwado ahụike.
Ụlọ ọgwụ niile kwesịrị ka ha bụrụ ọka ibe nwere ngwaọrụ zuru òkè. Ụmụaka kwesịrị ị na-eri ju nri afọ. Ezigbo mmiri oñuñu kwesịrị ị dị na mba dum. Ihe ndị a na-enye ahụ is ike na ogologo ndụ.
Nke abụọ, *Ịzụ ụmụ mmadụ n’ezigbo ụlọakwụkwọ*: Ị gụ akwụkwọ bụ otu ihe na-enye aka nke ukwuu na mmepe obodo. Ndị ọchịchị kwesịrị ime ka ụlọakwụkwọ niile na Alaigbo bụrụ ebe e nwere ezigbo ụlọ, ndị nkuzi mara ihe akọrọ, ezigbo oba akwụkwọ, ebe a na-amụ nkà na ụzụ, ebe a na-amụ kọmputa, na ọtụtụ ihe ọzọ dị iche iche.
Ka ọ si dị ugbu a, ọtụtụ ụlọakwụkwọ n’Alaigbo enweghị ihe ndị a m depụtara. Ọ kwesịrị ka nwa afọ Igbo ọbụla gụọ akwụkwọ opekata mpe afọ itoolu. Gọọmenti kwesịkwara ị kwado ma ọ bụ zụọ ụfọdụ na nnukwu mahadum ebe ha ga-amụta ka e si arụpụta ọtụtụ ngwaọrụ, ígwè, ụgbọala, ihe oriri na ndị ọzọ. Ka anyị jiri ehihie chụọ ewu ojii.
Nke atọ, *Ịkụzi ọrụaka*: Ọrụaka na-enye kwa ezigbo aka na mmepe obodo. Ndị nne na nna na ndị ọchịchị ga-agba mbọ hụ na ụmụaka ha mụtara ọbụna dị ótù ọrụ áká. Ka ndị ọchịchị na ndị niile mmepe obodo na-amasị gbaa mbọ rụọ ọtụtụ ebe a na-akụzi Ọrụaka dị iche iche.
Biko, Gọọmenti Steeti kwesịrị ka a dọnyere ndị nkụzi ọrụaka úkwù ọ kachasị ndị juru Aba Ngwa, Nnewi, Ọkpọsi, Nkpọọ, Abakaliki, Okigwe, Enugwu, Nenwe, Ágbọ, Obigbo na ọtụtụ obodo ndị ọzọ dị iche iche. Nkea ga-enyere ha aka ịzụpụta ọtụtụ ụmụ ntorobịa nwere íhé ọrụaka. Agụụ a naghị agụ onye ọ bụla nwere ezigbo ọrụ o ji enweta ego.
Nke anọ, *Ị kwado azụmahịa:* Ọmụmụ azụmahịa so ná íhé zọpụtara Ndigbo ka a lụsịrị ọgụ Biafra. E kwesịrị ka elebara ya anya ka nwa mmụọ emegbu la nwa mmadụ, ma nwa mmadụ emegbu la nwa mmụọ. Ọchịchị steeti na ime obodo kwesịrị ị mee ka ahịa dị iche iche n’Alaigbo niile bụrụ ọkà ibe.
Igbo si na aka ájá ájá na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Ihe ndị a m depụtara bụ isi sekpu ntị na-eme ka ụbịam na agụụ laa na obodo. Ùdó, ọkụ latrik na ezigbo okporo ụzọ ga-achụ ha aka n’azụ chụọ ụbịam na agụụ ọsọ ụkwụ eru ala pụọ n’Alaigbo.
Atụmatụ mmepe obodo nke mba ụwa nke bekee kpọrọ “Sustainable Development Goals (SDG), depụtara ịchụ ụbịam ka nke mbụ, ịchụ agụụ bụ nke abụọ, inwe ahụike bụ nke atọ ebe ịgụ ezigbo akwụkwọ bụ nke anọ.
Ngwanụ, oge eruola mgbe e ji a ma mbe abụọ nke bụ oke. E mee ngwa ngwa, emeghara ọdachi.
Ya gaziere Igbo niile.
Previous Post: IKESA NGWA NBELATA NHỊAMAHỤ ỌRỊA KORO: STEETI NDỊ ỌZỌ KWESỊRỊ IṄOMI ABỊA-GSAC
Next Post: ỌRỊA KORO: NDỊ ỌRỤ NCHEKWA GBAGBURU IHE KARỊRỊ MMADỤ ISII N’ABALỊ ISII MAKA NA GỌỌMENTI A NA-EKPUCHI HA-INTERSOCIETY